कोरोना पछि प्रत्येक वर्ष “प्रकृति लकडाउन” गरौं - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
कोरोना पछि प्रत्येक वर्ष “प्रकृति लकडाउन” गरौं
सारा संसार कोरोना भाइरसको युगमा बाँचिरहेको छ ।
मानिसहरुको सम्पूर्ण जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ ।
हामीहरू घरमा बन्दी छौं । जीवनको गति ढिलो भएको छ। तर यो मन्दीको बीचमा हामीले एउटा सकारात्मक कुरा देखिरहेका छौं । त्यो हो प्रकृति । प्रकृतिले फेरि आफ्नो घाउहरू निको पार्न थालेको छ । मानव घरमा बस्नका कारण, संसारका धेरै शहरहरुमा प्रदूषण कम भएको छ । नदीहरू सफा देखिन थालेका छन् । यति सफा कि पानी पनि पिउन योग्य भएको छ ।
यसै बीचमा, सब भन्दा राम्रो समाचार सुन्न पाई रहेका छौं कि ओजोनको तह (Ozone Layer) भरिन थालेको छ । विश्वले कोरोनाको नकरात्मक बिन्दु हेरिरहेको छ । तर सकारात्मक कुरा यो हो कि यदि तपाईंको हातबाट एउटा चीज खोसिएको छ भने, अर्को हात बाट त्यो भन्दा धेरै राम्रो पाई रहेको पनि हुन्छ ।
सफा हुदैछ पृथ्वीको हावा
विश्वमा लकडाउनको कारणले गर्दा अहिले हावा एकदम सफा भै सकेको छ । प्रदूषणको स्तर धेरै तल झरेको छ । थुप्रै विदेशी समाचारहरुमा भनिए अनुसार सेटेलाईटले लगेको तस्वीर अनुसार २४ मार्च देखि २४ अप्रिल सम्म पूरा विश्व भरिमा नाइट्रोजन डाइअक्साइडको सांद्रता (Nitrogen dioxide concentration) मा तीव्र गिरावट देखिएको छ। तस्वीरहरु बाट पत्ता लाग्यो कि प्रदूषणको स्तरमा ४० देखि ५० प्रतिशत सम्मको गिरावट आएको छ । यद्यपि विश्वका थोरै भागहरूमा नाइट्रोजन डाइअक्साइड सांद्रता अझै उच्च छ।
पृथ्वीको घाउहरू निको हुँदैछ
यदि लकडाउनमा केहि राम्रो भएको छ भने, त्यो हो दिन प्रति दिन प्रकृतिको राम्रो हुदै गै रहेको तस्विर । सब भन्दा राम्रो समाचार ओजोन तहको प्वाल भरिन थालेको छ । यसको पुष्टि गर्दै वैज्ञानिकहरूले भने कि आर्क्टिकमा १० लाख वर्ग किलोमिटर चौडा प्वाल अब बन्द भएको छ । यो सबैका लागि अचम्मको कुरा हो किनभने बाल्यकालदेखि आज सम्म यस ओजोनको बारेमा सधैं चिन्ताका कुराहरु सुन्दै आई रहेका थियों । भर्खर पहिलो चोटि राम्रो समाचार सुन्न पाई रहेका छौं । पृथ्वीको यस्तो गम्भीर समस्या यसरी समाप्त हुनु कुनै ठूलो उपलब्धि भन्दा कम छैन । ओजोन तहको एक मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलमा फैलिएको दुर्लभ प्वाल थियो जुन वैज्ञानिकहरूले गत महिनाको सुरूमा पत्ता लगाएका थिए । प्वाल हुनुको कारण, उत्तरी ध्रुवमा कम तापक्रम मानिन्थ्यो । यदि यो प्वाल हावाको गतिसँगै दक्षिणतिर सर्न सफल हुन्थ्यो भने, यसले मानवलाई प्रत्यक्ष खतरामा पार्ने थियो ।
कपर निकन वातावरणीय अवलोकन सेवा (Copper Nikon Atomosphere Observation Services) ले जानकारी दिए अनुसार उत्तरी ध्रुवमा आर्क्टिकमा पर्ने अप्रत्याशित ओजोन प्वाल पूर्णतया बन्द छ । यस प्वालले गत महिना ठूलो आकार लीसकेको थियो । वैज्ञानिकहरूको डर थियो कि यो प्वाल दक्षिणी गोलार्धमा पुग्न सक्छ । तर त्यसो भएन । अप्रिल महीनादेखि उत्तरी ध्रुवको तापक्रम बढ्न थाल्छ, त्यसैले सम ताप मण्डल तातो भएको हुनाले यो प्वाल बंद भएको हो भन्ने केही वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ भने अर्को तिर कोरोना महामारीको डरले, सारा विश्व लकडाउनमा छ र प्रदूषण भैरहेको छैन र यो प्रदूषण नहुनु पनि ओजोन तहमा प्वाल भर्नको लागि एक कारण हुन सक्छ भन्ने अरु वैज्ञानिकहरुको धारणा छ ।
प्रकृतिले मानवलाई कोरोना भाइरसको रूपमा सन्देश दिएको छ कि यदि मानिसले चाहेछ भने, उसले प्रकृतिलाई सधैं सफा र सुन्दर राख्न सक्छ । आधुनिकताको यो दौडमा लागी रहेको मानव प्रकृति प्रति धेरै निर्दयी भएको छ ।
पानी सफा हुदै गै रहेको छ
विश्वव्यापी लकडाउनका कारण, कलकारखानाहरू बन्द छन् र मानिसहरु पनि आफ्नो घरहरुमा सीमित छन्। यस्तो समयमा हावा सफा हुँदै गैरहेको छ, नदीहरू सफा हुँदैछन, प्रदूषण घट्दै छ । जनावर, चराहरू र पशुहरूले यस अवसरको फाइदा लिइरहेका छन् । अनुसन्धान रिपोर्टका अनुसार दक्षिण एसियाका नदीहरुमा मुश्किलले देखिने डल्फिन अहिले देखिन थालेको छ । डल्फिन सधैं सफा पानीमा देखा पर्दछ । वातावरणविद्हरूका लागि पनि यो आश्चर्यको कुरा नै छ । यो भन्दा पहिला करिब ३० वर्ष अघि डल्फिन नदीहरूमा देखिने गरिन्थ्यो । तर पानीको प्रदूषण बढ्दै जाँदा डल्फिन पनि देखिन बंद हुदै गएको थियो ।
नदीहरूका लागि वरदान बन्दै लकडाउन
लकडाउनबाट प्रकृतिलाई लगातार फाइदा भैरहेको छ । संसारभरि नदीहरूको पानीको गुणस्तरमा सुधारको कडा रिपोर्ट छ । नदीहरूको पानी धेरै वर्ष पछि पिउन योग्य भएको छ ।
नदीको पानीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सुधार देखिएको छ । भारतमा नर्मदा नदीको टीडीएस पहिले १२६ मिलिग्राम मापन गरिएको थियो, जुन अहिले ७० मिलिग्राम छ । तपाईंलाई थाहा छैन भने जानकारी पाउनुहोस कि खनिज पानी (Mineral Water) को टीडीएस ५५ देखि ६० मिलिग्राम प्रति लिटर हुन्छ ।
नासाले भन्यो सफा हुदैछ एशियाको आकाश
नासाको उपग्रहले गत बीस बर्षमा उत्तर भारतको सब भन्दा कम एयरोसोल स्तर नाप्यो । यसको पछाडि मुख्य कारण मानव गतिविधिहरुको कमी हो । एरोसोलहरू धेरै सानो ठोस र तरल कणहरू हुन् जसले दृश्यता कम गर्दछ र मानवको फोक्सो र हृदयलाई असर गर्दछ । मानव द्वारा बनाईएको एयरोसोल प्रदूषणको घातक स्तर बढाउँछ । मानिसले बालीहरू जलाएर, जैविक ईन्धन जलाएर एयरोसोलहरू उत्पादन गर्दछन् भने ज्वालामुखी, जंगलमा आगो, बिजुली आदिबाट प्राकृतिक एयरोसोलहरू उत्पादन हुने गर्दछन् ।
७५ वर्षमा पहिलो चोटी यति सफा भयो पृथ्वी
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्वमा ४६ लाख मानिसहरु प्रदूषणका कारणले मर्छन् । आजभोली तपाईंको आँखाले पनि सफा र स्पष्ट मौसम देखि रहेको होला । सफा निलो आकाश र सफा हवा । लकडाउनका कारण विश्वका धेरै शहरहरूले प्रदूषणमा ठूलो गिरावट देखि रहेका छन । यतिबेला सडकहरूमा सवारी साधनको अभाव र पावरप्लान्टहरू बन्द भएको कारण नाइट्रोजन डाइअक्साइडमा पनि कमी देखिएको छ । विश्वभरिका सबैभन्दा प्रदूषित शहरहरूमा लकडाउनको कारणले गर्दा प्रदूषण ८० प्रतिशत सम्म घटी सकेको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार, पृथ्वी दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा यति शुद्ध थियो । यसको अर्थ यो भयो कि ७५ बर्षपछि पृथ्वी यति सफा भएको छ । यस वर्ष कार्बन उत्सर्जन पनि ५ प्रतिशतले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हजारों राजहंसहरु (Flemingos) मुंबईमा देखा परे
लकडाउन को एक फाइदा यो पनि छ कि चरा चुरंगी र जनावरहरू सडक र शहरहरूमा स्वतन्त्र रूपमा हिंडेको देखिन्छ । चाहे त्यो दक्षिण अफ्रीकाको जंगल बाहिर सुतेको वा आराम गरिरहेको सिंह होस वा मुम्बईको समुद्र किनारामा देखिएको डल्फिन । मानिसहरु यसरी घर भित्र बसेको जनावरहरु लाई एकदम मन परेको छ । यसैको परिणाम हो कि भारतको मुम्बई मा हजारौं राजहंसहरु (Flemingos) एक साथ देखा परेका छन । मानव घर भित्र बसेको दुई महिना भित्र प्रकृति कसरी आफ्नो रूप देखाउँदै छ ! कसैले पनि सोचेको थिएन होला यो लकडाउन प्रकृतिको लागी यति राम्रो होला भनेर ।
मानिसलाई प्रकृतिको सन्देश
प्रकृतिले मानवलाई कोरोना भाइरसको रूपमा सन्देश दिएको छ कि यदि मानिसले चाहेछ भने, उसले प्रकृतिलाई सधैं सफा र सुन्दर राख्न सक्छ । आधुनिकताको यो दौडमा लागी रहेको मानव प्रकृति प्रति धेरै निर्दयी भएको छ । प्रकृतिले मानिसलाई भनिरहेको छ, “हे मानिस, तं सुध्री हाल । म त कुनै न कुनै रुपमा मेरो सन्तुलन बनाई हाल्छू । तर मैले आफ्नो संतुलन बनाउनका लागी तंलाई कुनै न कुनै प्रकारले हानी पुर्याउनै पर्ने हुन्छ । त्यसैले म चाहन्छु कि मलाई आफै संतुलन न गर्नु परोस, तं आफै गर, ताकि तेरो क्षति न होस.”
यसमा कुनै शंका छैन कि यदि मानिसले चाहन्छ भने, उसले सँधै आफ्नो गाउँ, शहर, देश, संसार र प्रकृतिलाई सफा र सुन्दर राख्न सक्दछ । हेर्नुहोस त, आज प्रदूषण कम भएको कारणले मात्र संसार र प्रकृति यति सुन्दर बन्न पुगेको छ । सफा हावा, सफा पानी, सफा आकाश जहाँसुकै । यो त प्रकृतिले वा कोरोनाले गर्दा भएको हो । तर यस्तो लकडाउन हामी मानिसहरु आफै जानी जानी पनि त गर्न सक्छौं यस पृथ्वी र प्रकृतिलाई सफा र सुन्दर राख्नका लागी !
विश्वका धेरै देशहरूमा समय समयमा बैठकहरू हुन्छन, कहिले सार्कका देशहरूको बैठकहरू, कहिले न्ठ देशहरूको बैठकहरू र कहिले न्द्दण् देशहरूका बैठक आदि । यी बैठकहरूमा अन्य छलफलहरूको साथमा यो छलफल पनि हुनुपर्दछ कि प्रकृतिको सन्तुलन कायम राख्न प्रत्येक वर्ष कम्तिमा पनि एक साताको “प्रकृति लकडाउन” (Lockdown for Nature) अनिवार्य रुपमा गर्नै पर्दछ । यसो गरी हामीले प्रकृतिलाई हाम्रो मानव हुनुको परिचय पनि दिन सक्छौं, नत्र भने हामीहरुमा र जनावरहरुमा केही फरक रहने छैन ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, असार ७ २०७८ १५:५०:२१